Wasiirka amniga Soomaaliya oo shaaciyey halka la geynayo dhagaxda ku xiran wadooyinka Muqdisho – Hornafrik Media Network
Wasiirka amniga Soomaaliya oo shaaciyey halka la geynayo dhagaxda ku xiran wadooyinka Muqdisho
By Liibaan Nuur	 On Feb 15, 2020
Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in dhowaan waddooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho la furi doono, isla markaana la rari doono dhagaxda la dhigay waddooyinka qaar qaar ee bartamaha magaalada.
Wasiirka ayaa sheegay in dhagaxda ku xiran waddooyinka Muqdisho la dhaafin doono wadada weyn ee Wadnaha oo la geyn doono waxii ka soo bilaawda wadooyinka Sodonka iyo Wershadaha oo gees u xigta wadooyinka waaweynee magaalada Muqdisho.
Cabasho xoog leh iyo walaac badan ayey dadka reer Muqdisho ka qabaan wadooyinka xiran iyo amni darada magaalada oo aan marna is dhimeyn, sidoo kale hoos u dhac dhanka dhaqaalaha ah ayaa la aaminsanyahay in laga dhaxlay wadooyinka xiran ee caasimadda.
Wasiir Islow oo wareysigan siiyey TV-ga Universal ayaa sidoo kale ka hadlay arinta askartii lagu dilay weerarkii lagu qaaday guriga hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Wasiirka ayaa sheegay in wiilsha dhintay ay reerahoodii dowladdu kala xaashay oo mag dhaw siisay, xal buuxana laga gaaray arintaas, sida uu hadalka u dhigay.
Fiqi: Wareysigii Madaxweyne Farmaajo “Nin kaligiis garramay”